Uma ingane ukuba abhapathizwe - okudingayo salokhu?
Isakramente Ubhapathizo - kuyinto emkhubeni engcwele owawuba sesonto lobu-Orthodox. kuphakama isidingo kubazali abafuna benika izingane zabo unengelosi, ngubani kuyolinda futhi bavikele ikhasimende lakhe ekulimaleni ekukholweni. Futhi kubalulekile ukuba afeze hhayi kuphela isiko, kodwa futhi ukulungiselela ke. Cabanga indlela yokwenza ingane ebhapathiziwe, okudingeka ukwenze futhi kufanele ukuthi liziphathe abazali.
Isinyathelo sokuqala ukukhethwa godparents. Lesi yisinyathelo esibalulekile kakhulu ukuthi ufuna ukulungiselela kahle. Memela ibhizinisi wemfanelo onjalo abantu ngokulambisa ajwayelekile is hhayi Kunconywa, nabangane abanakwethenjwa ngaso sonke isikhathi ukufeza umgomo wayo. Izinketho unike izihlobo - kungaba abazalwane, odade, obabekazi, omalume nabanye. Udinga nje kuphela ukuba athobele omunye umthetho, okuyinto izisethile iNkosi - godparents Awukwazi ukuba abantu abashadile kanye imibhangqwana. Abathole ngemva izimiso lokuba babhapathizwe akufanele ungene ubuhlobo obuseduze.
Okusanda, umthetho omusha phambi emkhubeni yethulwa. It itholakala lokuthi ukuthi godparents abhekane ingxoxo catechetical. Amanye amasonto baye bahlela imihlangano emithathu, omunye - eyodwa. On batshelwa ukhuluma imisebenzi ka godparents, isidingo yesiko. Lapho beqeda izinkulumo zinikwa ikhadi ekhethekile, okuyinto eyenziwa esikhathini esizayo ubhapathizo wengane. Okudingayo yezinkulumo catechetical - lokhu okulotshwe yiliphi isonto futhi ukulalela kwamahhala ukwaziswa okuthakazelisayo nokuwusizo.
usuku wengane christening, abazali kumelwe babe ahlanzekile, mhlawumbe white ithawula, ababhapathizwayo isethi futhi pectoral esiphambanweni. Eminyakeni emibili izinto, ngokwemfundiso yesiko, kufanele uthenge abamukeli. Ukuze uthole umfana aye ihembe evamile, abangcweliselwe eBandleni, futhi amantombazane - ingubo. Kumele kube cap. Isethi wobhapathizo ingane ezigqokisa ngemva kokugeza wefonti. Ngaphezu kwalokho, nge isidingo ukuthatha izingubo extra, amanabukeni, isikhohliso lembodlela amanzi noma ubisi.
Lapho ingane ebhapathiziwe, udinga - kuyinto sihlale sizolile. kakhulu Ngokuvamile izingane uqale ukukhala ngesikhathi isiko ukuthi kubhekwa evamile. Kwezinye izimo, kuba avunyelwe uqobo ukugcina umama ingane nxa ekhala kakhulu. ingane ubhapathizo kuthatha imizuzu 40.
I isiko ngokwalo ukufunda imithandazo nokuzinikela nomntwana yobuKristu. Kusukela manje, naye uyohlale unengelosi, noNkulunkulu uyokwazi ukukubona futhi ukuhambisana izicelo. Godparents, kuyobe zibekelwe isikhathi esithile ukusiza godson ngokuthanda kwakhe, afundise imithandazo yakhe. Manje - umama wesibili kanye nobaba, ngubani, uma kunesidingo, kumele uthathe imfundo izinyane phezu. Ingane kumele ngibathanda futhi ngibahlonipha njengoba abazali bakhe bangempela.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe singakanani isikhathi ingane wachitha ukubhapathizwa, kudingeka ukuletha nendlela uthole ingxoxo catechetical, ukuze waziwe esontweni. Kukhona ungakwazi ukuthenga esiphambanweni izingubo for umntwana.
Izakhi ezine uthando lweqiniso izimfundiso Buddha
Isonto "Insindiso" (eBaranovichi) - ukunakekelwa kanye nosizo
Cathedral Holy Trinity Cathedral Petersburg
Melodrama Kuhle ngothando - kuyini?
Bumper: I ethengisa kakhulu izingxenye ezisele for izimoto
Indlela ukuqeda izindawo ngemva induna Amathiphu
Indlela ukukhetha yezinkinobho kwamajazi esithombeni? Indlela thunga inkinobho ijazi?
I-chemistry Organic futhi fizkolloidnaya: incazelo, izinjongo kanye nezici